Cilladaha nolosha ayaa dib uga soo noqda, laga bilaabo uurka illaa dhalashada (fiidiyowga) - Afrikhepri Fondation
Udambooyinka nolosha raadraaca, laga bilaabo uurka illaa dhalashada (Fiidiyo)
Ltaariikhdiisa dib-u-eegis, laga soo bilaabo uur ilaa dhalasho, sagaalkii bilood ee xiisaha gaarka ahaa: uurka, hiddo-wadaha nolosha aadanaha. Barbara iyo Manu waxay filayaan ilmahooda ugu horeeya. Iyaga, usbuucba usbuucba, iyo mahadnaqa aqoonta ugu dambeysa ee sayniska iyo fursadaha aan caadiga ahayn ee ay bixiyeen sawirrada kombiyuutarka laga sameeyay, agaasimaha Nils Tavernier ayaa nagu hogaaminaya inaan ogaano nolosheena koowaad: nolosha intrauterine.
Waxaa u sheegay Jaques Perrin, "Odyssey of Life" wuxuu adeegsadaa sawirro kombiyuutar laga soo saaray oo xaqiiqada dhabta ah ee safarka ah ee socdaalkan asalka ah. 2000 saacadood oo ah shaqo dahab sameeye ah, oo uu fuliyay Mac Guff Ligne, oo loogu talagalay soo saar sixir. Iyagoo leh, sida taxane ah, sheekada dhabta ah iyo tan jilicsan ee Barbara, Manu iyo ilmahooda.
5 cusub oo ka yimid € 12,00
21 waxaa laga isticmaalay € 2,16
Iibso 12,00 €
laga bilaabo Sebtember 18, 2020 9:47
Taariikhda lagu sii daynayo 2006-02-01T00:00:01Z
Waa maxay salaadda iyo ka fiirsashada
Mustaqbalka Nolosha Dunida - Hubert Reeves (Video)
Sidee loo diyaariyaa Saka Saka?